Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon’olombelona & Fifidianana Filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2018 3:24 GMT
Marobe ireo bilaogera nanoratra momba ny nahitàna an'i Saeed Mortazavi, filohan'ny fampanoavana ao Tehran, tao anatin'ny delegasiona Iraniana tany amin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana momba ny Zon'olombelona tao Zeneva. Nezahan'ny bilaogera vitsivitsy nofantarina izay antony nahatonga ny governemanta Iraniana handefa solontena zara raha nisy mpiaro zon'olombelona tahàka izany. Ny sasany tamin'ireo bilaogera niezaka nampahatsiahy antsika ny nataon'i Moratazvi ary nizara ny antony anoheran-dry zareo ny fitsidihany. Ndeha hojerentsika ny sasantsasany tamin'ireny bilaogy ireny.
Reza Allamezadeh, bilaogera, mpanoratra, & mpanatontosa sarimihetsika, mihevitra fa ny fandraisan'i Mortazavi anjara ao amin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana momba ny Zon'olombelona dia mampiseho ny haben'ny fivadihan'ity izao tontolo izao ity ho ambony ambany. Ho an'ilay bilaogera, na ny parlemanta iraniàna aza dia mihevitra an'i Mortazavi ho voarohirohy tamin'ny fampijaliana sy famonoana ilay Kanadiàna-Iraniàna mpanao gazety Zahra Kazemi. Ampian'ilay bilaogera
Ankehitriny hitantsika fa nasondrotry ny Mpitarika izy ary lasa mpikambana ao anatin'ny delegasiona iraniàna momba ny zon'olombelona any Zeneva. Maneso fotsiny an'izao tontolo izao ny fanjakàna iraniàna (Persiàna).
Tsy izy ve no iray amin'ireo ahiahiana amin'ny nahafaty an'i Zahra Kazemi? Tsy izy ve no iray tamin'ireo nanakatona gazety marobe?
Masoud Behnoud, mpanao gazety, mpanoratra ary bilaogera no miezaka mitady izay antony nandefasana an'i Mortazavi. Manoratra izy: Manana diplaomaty marobe ny ao amin'ny rafi-pitsaràna & ary mpahay lalàna iraisampirenena izay mahafantatra izao tontolo izao sy afaka miresaka aminà teny vahiny iray (Persiana). Soratan'i Behnoud hoe tsy mahay afa-tsy ny tenindrazany i Mortazavi. Ampian'ilay bilaogera fa;
Hanif, bilaogera & mpanao gazety, miresaka momba an'i Manouchehr Motaki , Minisitra Iraniana misahana ny Raharaha Ivelany, sy ny fanehoankeviny momba ny fangatahan'ny governemanta kanadiàna tamin'ny Alemaina (Persiana) mba hisambotra an'i Mortazavi. Taterin'i Hanif ny zavatra nambaran'i Motaki ho valin'izany.
Mandritra izany, io bilaogera io ihany no miezaka ny mamantatra ny antony nandefasana an'i Mortazavi hanatrika ny kaonferansan'ny Firenena Mikambana tany Zeneva, ny bilaogera iraniàna sasany miezaka mamantatra ny antony nandresen'i Ahmadinejad tamin'ny fifidianana ho filoha tamin'ny taona lasa.
Abtahi, politisiana reformista & bilaogera manoratra ao amin'ny Webnevesht hoe tonga teo amin'ny fitondràna i Ahmadinejad noho ny fampanantenany hitondra vahaolana ara-toekarena ary tsy noresahany ny momba ireo fifandraisana iraisampirenena. Soratan'i Abtahi ny momba an'i Ahmadinejad ho lasa mpisava lalàna amin'ny olana nokleary taorian'ny nahalany azy ho filoha, raha tokony ho namela izany andraikitra izany ho an'ireo diplaomaty iraniàna hafa (Persiana). Lazain'ilay bilaogera fa tokony hifantoka amin'ny olana toekaren'ny vahoaka i Ahmadinejad fa tsy ‘hilalao’ ny toerana maha-mpitarika mahery fihetsika azy.
Ofoghe Azadi manontany raha toa tsy takatr'ireo reformista mpanao gazety mihitsy hoe ny ankamaroan'ireo kiana goavana natao an'ilay governemata teo aloha notarihan'i Khatami dia ny tsy fahalavorariany ara-toekarena. Araka izany, ahoana no niandrasan-dry zareo ny olona hoe hifidy an'i Mustafa Moin (olon'ny reformista) izay tsy niresaka akory ny olana ara-toekarena nandritry ny fifidianana. Tsy afaka akory nampandany tolodalàna teny amin'ny Parlemanta i Khatami. Mila zavatra miova ny vahoaka. Angamba i Ahmadnejad no hany sisa safidy (Persiana).